Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu horkacaayo, ayaa waxay galabta gaareen Magaalada New Delhi – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu horkacaayo, ayaa waxay galabta gaareen Magaalada New Delhi Ee Xarunta Wadanka India.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Wadanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, ayaa waxay kaga sii gudbeen India, oo lagu wado in Madaxweynuhu uu shir kaga qaybgalo.
Shirkan, ayaa waxaa lagu wadaa inay yeeshaan Wadamada Afrika iyo India, waxaana noociisa lagu sheegay mid ay labada dhinac iskaashi kaga yeelanayan arrimaha ganacsiga.
Shirka, ayaa maalinta Khamiista ka furmi doono Caasimadda India, waxayna Somaliya ku soo bandhigi doontaa iskaashiga ganacsi, ay la yeelan karto India.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi waxa uu la kulmi doonnaa Ra’iisal Wasaaraha India, Narendra Modi.
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa waxa uu sheegay in shirkan ay Kenya diiradda ku saari doonto, sidii ay ku heli laheyd daawooyinka cudurka dilaaga ee HIV/AIDS, si ay u adeegsadaan dadkiisa la tacaalaya cudurkaasi.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa wuxuu xaqiijiyay in diyaarad nooca yar ay maanta ku soo dhacday Deegaanka Cumar Beere